Ingabe ikhona ebandleni ezinhle ongumKristu isiSwidi? | Apg29
Ingabe ikhona ebandleni ezinhle ongumKristu isiSwidi?
Uma wazi izinto ezinhle uJesu Swedish esimaphakathi ibandla lobuKristu ukuze atshele lapha! Sekela impendulo yakho sicela!
Ngibiza imiphakathi omuhle yobuKristu lapho wamemezela ukuqonda eziyisisekelo kweBhayibheli ukholo, 'ukuthi uJesu uyiNkosi nokuthi uyakusindiswa uma uthola naye!